रोचक बन्यो आइपिएल समीकरण, १ खेल बाँकी हुँदा २ स्थानका लागि ५ टिमको प्रतिस्पर्धा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
रोचक बन्यो आइपिएल समीकरण, १ खेल बाँकी हुँदा २ स्थानका लागि ५ टिमको प्रतिस्पर्धा
शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १२:५१ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। संसारकै ठूलो बजेटको टि–२० क्रिकेट लिग आइपिएलको प्लेअफ समीकरण अन्तिम समयमा आउँदा निकै रोचक बनेको छ । लिगको प्लेअफमा पुग्ने ४ टिममध्ये २ टिम छनोट भइसकेका छन् । अहिलेसम्म १३ खेलबाट १८ अंक जोडेको सनराइजर्स हैदराबाद र १२ खेलबाट १६ अंक जोडेको चेन्नइ सुपरकिंग्स प्लेअफमा पुगिसकेका छन् ।
बाँकी २ स्थानको लागि ५ टिमबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचवटै टिमले १३ खेल खेलिसकेका छन् र अब एउटा मात्र खेल खेल्न बाँकी छ । यही एउटा खेल ती टिमहरुको लागि प्लेअफ पुग्ने अन्तिम मौका हुनेछ । लिगका जम्माजम्मी ८ टिममध्ये दिल्ली डेयरडेभिल्स भने दौडबाट बाहिरिइसकेको छ । बाँकी रहेका ५ टिमहरु प्लेअफमा पुग्ने दौडमा छन् ।
अंक तालिकामा अहिले कोलकाता नाइटराइडर्स १४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । यद्यपि ऊ पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । किनकि उसको नेट रनरेट ऊभन्दा पछि रहेका मुम्बइ र बैंगलोरको भन्दा निकै कम छ । यदि अबको खेलमा कोलकाताले हार्यो र यी दुई टिमले जिते भने कोलकाता प्लेअफबाट बाहिरिनेछ । यसपछि अंक तालिकामा क्रमश मुम्बइ इण्डियन्स चौथो, रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर पाँचौं, राजस्थान रोयल्स छैटौं र किंग्स इलेभेन पंजाब सातौं स्थानमा छन् ।
यद्यपि मुम्बइ, बैंगलोर, राजस्थान र पंजाबको समान १२ अंक छ । नेट रनरेटका आधारमा मात्र यी टिमहरु अंक तालिकामा अघिपछि छन् । अहिलेसम्मको अंक तालिका हेर्दा पहिलो र दोस्रो स्थानमा हैदराबाद र चेन्नइ रहने लगभग पक्काजस्तै छ । तेस्रो र चौथो स्थानका लागि बाँकी ५ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
अब लिगमा ५ खेलमात्र बाँकी छन् । तीमध्ये आजको खेलले टिमको प्रतिष्ठाबाहेक अन्य कुरामा खासै असर गर्ने देखिन्न । किनकि आज चेन्नइ सुपरकिंग्स र दिल्ली डेयरडेभिल्सबीच खेल हुँदैछ । यो खेल दिल्लीले जितेमा पनि चेन्नइ दोस्रो स्थानमा कायमै रहनेछ । प्लेअफमा पहिलो वा दोस्रो स्थानमा पर्नुले खासै फरक पर्दैन यद्यपि तेस्रो स्थानमा झर्नुपरेमा चाहिँ फाइनल पुग्न कठिन हुन्छ । तर, आज हारे पनि चेन्नइ तेस्रो स्थानमा झर्ने सम्भावना निकै कम छ । आज चेन्नइले जितेमा भने ऊ पहिलो स्थानमै पुग्नेछ । यसले पनि खासै फरक पर्ने छैन किनकि हैदराबाद दोस्रो हुनेछ । जसरी पनि प्लेअफको पहिलो क्वालिफायर हैदराबाद र चेन्नइबीच हुने निश्चितजस्तै छ ।
लिग चरणका दुई खेल भोलि हुँदैछन् । भोलिको पहिलो खेल रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र राजस्थान रोयल्सबीच हुँदैछ । यो खेल बैंगलोरले जितेमा ऊ १४ अंकसहित अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिनेछ र राजस्थान दौडबाट बाहिरिनेछ । यो खेल राजस्थानले जितेमा भने ऊ १४ अंकसहित अंक तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लनेछ । (राजस्थानको नेट रनरेट निकै कम छ यद्यपि बैंगलोरलाई विशाल अन्तरले हराउन सकमा भने ऊ तेस्रो हुने सम्भावना पनि छ) ।
भोलिको दोस्रो खेल कोलकाता नाइटराइडर्स र सनराइजर्स हैदराबादबीच हुँदैछ । यो खेल कोलकाताले जितेमा ऊ १६ अंकसहित प्लेअफ पुग्नेछ । तर, कोलकाता हारेमा भने भोलिको पहिलो खेल राजस्थानले जितेको अवस्थामा ऊ तेस्रोमै रहने सम्भावना रहन्छ । बैगलोरले जितेको अवस्थामा भने कोलकाता चौथो स्थानमा झर्नेछ । यद्यपि यो खेलको नतिजा जे भए पनि हैदराबाद भने पहिलो वा दोस्रो स्थानमै रहनेछ ।
पर्सी पनि २ खेल हुँदैछन् । पर्सीको पहिलो खेल दिल्ली डेयरडेभिल्स र मुम्बइ इण्डियन्सबीच हुँदैछ । यदि यो खेल मुम्बइले जितेमा ऊ प्लेअफ पुग्ने सम्भावना बलियो छ । तर मुम्बइ हारेमा भने ऊ प्लेअफको दौडबाट बाहिरिनेछ । यो खेल मुम्बइले जित्दा त्यतिबेलासम्म अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको टिम सुरक्षित रहनेछ भने चौथो स्थानमा रहेको टिम बाहिरिनेछ ।
लिग चरणको अन्तिम खेल पर्सी चेन्नइ सुपरकिंग्स र किंग्स इलेभेन पंजाबबीच हुँदैछ । यो खेल चेन्नइले जितेमा चेन्नइ पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहनेछ र पंजाब बाहिरिनेछ । तर यो खेल पंजाबले जितेमा भने पंजाब प्लेअफ पुग्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि त्यो खेल नहुँदै खेल जितेमा पंजाब प्लेअफ पुग्ने वा नपुग्ने निर्धारण भइसकेको हुनेछ । पंजाब प्लेअफ पुग्ने सम्भावना निकै कम छ । यद्यपि भोलिको पहिलो खेल राजस्थानले जित्ने, दोस्रो खेल हैदराबादले जित्ने, पर्सीको पहिलो खेल दिल्लीले जित्ने अवस्थामा मात्र पंजाबको सम्भावना रहन्छ । यद्यपि त्यति हुँदा पनि पंजाब प्लेअफ पुग्न उसले चेन्नइलाई ठूलो अन्तरले हराउनुपर्ने हुन्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: दुई पार्टी एकीकरणको खुशियालीमा दीपावली
NEXT POST Next post: एक शाही विवाहमा अरबौ खर्च , खाना देखि लुगा सम्मको खर्च हेर्नुस यस्तो छ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १२:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १२:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १२:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १२:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १२:५१